किन कर्फयू लागे जस्तै देखियो काठमाण्डौं ? – Nepal Journal
किन कर्फयू लागे जस्तै देखियो काठमाण्डौं ?
- हिन्दुहरुको महान चाड बडादशै नवमीको दिन माइतीघर तीनकुने सडकमा देखिएको दृश्य
Posted By: Nepal Journal September 29, 2017 | १३ आश्विन २०७४, शुक्रबार १७:१०
बडा दशै मनाउनका लागि ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणले राजधानी छाडेका छन् । लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण राजधानीबाट बाहिरिए पछि राजधानी सुनसान बनेको छ । उपत्यकाका अधिकांस स्थानमा चहलपहल घटेको छ भने सडक पनि सुनसान देखिएका छन् ।
सधैं जसो जाम मात्र खेप्नु पर्ने राजधानीका सडकमा अहिले औंलामा गन्न सकिने संख्यामा सवारी साधन चलेका छन् । नवमी दिन भएकाले केही चहल पहल देखिए पनि दशमीका दिन भने सडक कर्फ्यू लागे जस्तो देखिने छ ।
दिनहुको कोलाहलबाट आजित बनेका राजधानी बासीहरु अहिले शान्त राजधानी देखेर सँधै यस्तै भईदिए हुन्थ्यो भन्न थालेका छन् । राससले उपलब्ध गराएको तस्बिरहरुमा बानेश्वर तथा तीनकुनेको सुनसान सडक देखाइएको छ ।
– हिन्दुहरुको महान चाड बडादशै नवमीको दिन माइतीघर तीनकुने सडकमा देखिएको दृश्य
Be the first to comment on "किन कर्फयू लागे जस्तै देखियो काठमाण्डौं ?"